(6,440 Mpitsidika izay nihevitra ity lahatsoratra ity)
Kuonen Sylvan hoy i:
14. Septambra 2015 amin'ny 14:38
tsara ny andro, isika, azafady manodidina Kovetabe fandroana mafana ho an'ny 4 olona. Amin'ny lohataona ho an'ny fampiasana. Indoor na ivelan'ny trano lafaoro zavatra. Azonao lazaina ahy fa tena tsy mety lany mba hatolotra ao amin'ny Valais Soisa. holzart egal
16. Septambra 2015 amin'ny 19:53
Manana barika fandroana isan-karazany ny fampiasana hiboiboika. Ny antontan-taratasy izahay, naniraka tany aminao amin'ny alalan'ny e-mail. Manana isan-karazany ny samy hafa karazana hazo sedera mena toy ny Canadian, Kesika, Thermoholz – avy amin'ny mora ny manokana.
Fa ny fanontaniana na mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa aminay-baiboly anananao.